VLC ku siinayaa hab fiican si aad xaalkaa video qalabka fudud. Waxaa laga yaabaa in qalab premium-tafatir ah laakiin sameeya shaqada aasaasiga ah ee jarida / falinjeeerka video ah. Waxa kale oo aad iyaga ku milmaan kartaa in la abuuro xiiso leh a video.
Photos Transfer ka iPhone si Mac la Wondershare TunesGo Retro: Part1.
Part2: Isticmaalka Email inay sawiro ka iPhone wareejiyo Mac
Part3: Isticmaalka iphoto in ay sawiro ka iPhone wareejiyo Mac
Part4: Isticmaalka Ciidamada Image in ay sawiro ka iPhone si Mac wareejiyo
Part5: Isticmaalka Photo Stream in ay sawiro ka iPhone wareejiyo Mac
Part6: Chart Isbarbar
Part1: Maxaad inay sawiro ka iPhone wareejiyo Mac?
Si aad xogta amaan iyo kalsooni dhan jeer waa wax taas oo mar walba lagu hayaa ee mudnaanta sare leh. Data dhoofinta ka iPhone si Mac waa wax loo arki karaa mid ah sida ay u ma aha oo kaliya ilaaliya xogta laakiin sidoo kale waxaa uu u suuragelinayaa dadka isticmaala si ay u helaan ka aragti ka duwan sidii Mac mar walba kala duwan oo ka mid ah muuqaalada oo iPhone ma laha . Ay ka mid yihiin ka daganayd ee videos iyo in la hubiyo in duubey waxaa lagu ciyaaray sami waa sidoo kale qaar ka mid ah sifooyinka la jeclaa oo ag isticmaala oo lagu wareejiyo sawiro si Mac. In tutorial this dhaqanka ugu fiican ee ka mid ah qaataan karaa si loo hubiyo in photos waxaa loo wareejiyaa Mac ka iPhone ayaa laga wada hadlaa si loo hubiyo in hannaanka weli waafaqsan shuruudaha users iyo sidoo kale weli siman. Ka dib markii qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka yihiin in la xiriira suuqa kala iibsiga ee photos ka iPhone si Mac:
Waa arrin aad u dabacsan si ay gurmad xogta la Mac sida kala duwan la abuuri karaa waqti isku mid ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in nooc ah waa la bedeli karaa sida ay u baahan yihiin iyo waxay doonayaan isticmaalaha.
DR ama soo kabashada masiibada
Waa in la ogaadaa in iPhone ama qalab kale Apple waayin karaa wakhti kasta sida tiknoolajiyada ma waafaqsan. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in heshiiska uu ka dhigay inay Mac si haddii arin kasta nooc oo kale waxaa markaas wajahay gurmad waa jiraan si loo hubiyo in xogta la Weligood ma aysan guuldareysan oo ka soo dhacsaday markii gudahood.
Codsiga waxaa kaliya in siinayaa user xorriyad buuxda si loo hubiyo in natiijada ugu fiican ee suuragalka ah ayaa la siiyaa marka ay xogta wareejinta ka iPhone si Mac waa Wondershare TunesGo Retro kaas oo qabsaday suuqa ugu dhaqsaha badan ka dib markii la bilaabay ay sabab u tahay soo bandhigidda cabsi badan iyo sidoo kale isticmaalka fudud. Ma Mac laakiin in magac kale Apple Inc. ayaa sidoo kale taageeray sidoo in la hubiyo in xogta ay weli ka mid ah gaari ee ifbaxay sida jirin qaab daruur jiro. Tayada iyo sidoo kale factor ilaalinta ee sawirada ah ayaa weli ka dhan jeer la mid ah. Ma aha oo kaliya sawirada wareejiyo, laakiin waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu baddalo warbaahinta oo cayn kasta.
i. Kadib markii codsiga in lagala soo baxo http://www.wondershare.com/mac-ios-manager user u baahan yahay si loo soo dajiyo codsiga iyo waxa maamula si interface soo socda ayaa u muuqda sida hoos ku qoran:
ii. Software ayaa si toos ah lagu ogaan doonaa iPhone in uu la xiran Mac, waana hubaa in photos yihiin baxey sida hoos ku qoran ka dhigi doonaa:
iii. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in sawiro la loo dhoofinayay Mac lagu doorto oo markaas button dhoofinta hogaanka la isku soo riixayo si uu u dhameystiro nidaamka:
Habka ugu fudud loo isticmaali karaa xasilloon si fudud ayaa loo dhoofin ka daganayd ee:
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in sawir doonayaan, sawiro gudahood ayaa la riixi sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
ii. User ayaa markaas u baahan yahay in guji edit sida kaaga muuqata sawirka hoose:
iii. Marka la sameeyo menu soo socda ka muuqan doona sida lagu muujiyey:
iv. On shaashadda soo socda user ay u baahan tahay in nooca cinwaanka email si ay sawir sida lifaaqa ah diri sida hoos ku qoran:
Part3: Isticmaalka iphoto
Tallaabooyinka ku dhammayn lahaa ujeedada waa sida soo socota ee arrintan la xiriira:
i. User wuxuu u baahan yahay in ay ku xidhmaan iPhone la Mac isticmaalaya cable xogta sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
ii. Marka la sameeyo iphoto furi doonaa si toos ah sida hoose lagu arki karaa:
iii. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in ay "Import Si" Doorashadan la riixi hoose ee suuqa kala software sida lagu muujiyay shaxanka hoose. Halkan user u dooran karaan folder caga:
Part4: Isticmaalka Ciidamada Image
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in qabashada image la bilaabay sida ugu dhakhsaha badan iPhone uu xiriir la Mac sida lagu muujiyay shaxanka hoose:
ii. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in qalabka la soo xulay guddi saxda ah ee software ah sidii la arkay sawirka hoos ku qoran:
iii. Marka la sameeyo user markaas u baahan yahay in uu doorto photos in ay tahay in la soo dhoofiyo oo riix badhanka la xiriira. Haddii qof doonayo inuu sameeyo wixii kaloo ka dibna uu u baahan yahay in ay doortaan dejinta oo dhan sida ku cad tirada hoos ku dhammayn nidaamka:
Part5: Isticmaalka Photo Stream
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in goobaha> Photos & Camera si loo hubiyo in il sawirka waxaa u suurta sida hoos ku qoran:
ii. On Mac user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in il sawir la hubiyaa gudahood iCloud sida loo arki karaa in ay tiradaasi hoos ku qoran:
iii. Durduri sawir ayaa sidoo kale si loo eego loogana gudahood iphoto ah sida hoos ku qoran:
iv. Haddii nidaamka la dhamaystiro in buuxa ka dib mar walba iPhone uu xiriir la Mac il sawir toos ah lagu ogaan doonaa sawiro ka taleefanka si uu u hubiyo in heshiiska la bilaabin.
Phone Photos Iphoto Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ciidamada Image Wondershare TunesGo Retro
Roll Camera Photos
photos iPhone qaaday - - - -
Sawiro Photo Stream - - - Haa
Wadaag ka aaladaha kale ee - - - -
Photo Library Photos - - - Haa
Photos Synced ka computer si phone - - - -
Photo Album - - - Haa
Samaynta iyo wareejinta ee albums sawir ka iPhone si Mac - - - -
> Resource > Mac > 5 siyaabo oo ku saabsan sida loo sawiro ka iPhone wareejiyo Mac